Izembatho zemvula → Izingubo zokusebenza • Imifekethiso yekhompyutha ye-P & M
Izingubo zemvulaesikunikeza yona ku- isitolo yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme eziqinisekisiwe ezihlangabezana nezinkambiso namazinga aqinile. Ingenye yezinhlobo zezingubo ezithandwa kakhulu ekwindla nasebusika, eduze koboya obufudumele namasiketi entofontofo.
Izembatho zemvula eziqinisekisiwe
Izembatho zemvula zehlukaniswe ngezigaba eziningana ukwenza lula ukuseshwa. Okunezinhlobonhlobo esikunikezayo kungasetshenziswa ezimbonini eziningi. Ukukhethwa okukhulu nezintengo zokuncintisana kuzokuvumela ukuthi uthole umkhiqizo ofanele.
Bheka futhi: Ukufakelwa kwamakhompyutha - kuyini?
Izinhlobo ezahlukahlukene zonyaka ngamunye nezimboni
Izembatho zemvula zibonga amanzi ngenxa yezendlalelo ezikhethekile zangaphakathi ezenzelwe ukugcina umsebenzisi enethezekile futhi enethezekile.
Sinikeza: amasethi, amajazi, amabhantshi, amabhulukwe, ama-ponchos. Okuthandwa kakhulu amasethi enza lula ukukhetha ngokukhipha isidingo sokukhetha izinto ngazinye. Sinikeza ngobukhulu obuhlukahlukene, kanye nezingubo zosayizi wendawo yonke.
Imisa eyenziwe ngezinto eziguquguqukayo. Amasethi aqukethe, phakathi kwabanye kusuka kuma-dungaree namabhantshi. Zinikela ngokuvikelwa okugcwele emswakeni - kugcinwa ezingqimbeni ezingaphandle, futhi izinto ezingeziwe ezinjengezikhwama ezifakiwe zifaka isandla ekuvikeleni izinto ezifihliwe ekubeni zimanzi. Amakhithi angavimbeli imvula avumela ukuhamba komoya mahhala, okudingekayo ukunciphisa ubungozi bokujuluka ngokweqile.
Amajazi amajazi emvula ahlinzeka ngokuvikelwa okuphelele ekutholeni ukubonga okumanzi ekusetshenzisweni kwezinto ezisezingeni eliphakeme. Ukusetshenziswa kwalezi zinto kuhumusha ekuqineni okuhlukile nokumelana okuphezulu nomonakalo. Ukunikezwa kufaka amamodeli amaningi - kusuka kokuncanyana kwama-zloty ambalwa kuya kubiza kakhulu futhi kunamandla ngama-cuffs, amelana kakhulu nokusonteka.
AmaJakethi amajazi emvula umnyango onemikhiqizo ehlukahlukene evela kubakhiqizi abahamba phambili kulabo bantu abagxila ekubekezeleni nasekusebenziseni kakhulu. Amajakethi ahlangabezana nezindinganiso eziningi, amanye amamodeli anezinto ezibonakalisayo ezithuthukisa ukubonakala nokuphepha. Ikakhulukazi okuphawulekayo amamodeli aguquguqukayo anikeza induduzo ephelele ezimweni zomsebenzi okhethekile womzimba.
Ukuvikelwa ezintweni zangaphandle
Ukusebenza kwezingubo zemvula, ozothola esitolo sethu, sinikela ngokuvikelwa okukhulu emvuleni nasemoyeni. Inzuzo yayo enkulu ukunethezeka kokusetshenziswa, okungavimbeli inkululeko yokuhamba. Usayizi ofanele uvumela ukunyakaza okungenazinkinga ngesikhathi somsebenzi noma omunye umsebenzi. Kufanele futhi unake ukuqina okuphelele nokumelana nomonakalo. Ukukhiqizwa kwezingubo yizinkampani ezigxile ekusetshenzisweni kwezidingo ezikhethekile zezingubo zokusebenza kuqinisekisa ukuhamba komoya okufanele, ngaleyo ndlela kunciphise ubungozi bokujuluka. Ngenxa yalezi zakhiwo, imvamisa yokuthenga izingubo ezintsha iyancishiswa.
Izingubo zemvula ze-etigroizembatho zemvula ezingama-castoramai-decathlon rainwearizithuthuthu zemvulaizingubo ezingangenisi imvulaizembatho zemvula zesithuthuthuizingubo zokuzingela ezingangeni imvulaizingubo zemvula ezivikelayoizingubo zasengadini ezingangenisi imvulaizembatho zemvulaizembatho zemvulaizingubo zemvula zabesifazaneizembatho zemvula ze-decathlonizingubo zemvula zezinganeizingubo zemvula zabagibeli bezithuthuthuizingubo zemvula zezinganeizingubo zemvula zenjolobaizingubo zemvula zehhashiizingubo zemvula uKoszalinimvula Krakowizembatho zemvula zesithuthuthuizembatho zemvula zesithuthuthuizingubo zemvula zezithuthuthuimvula yebhayisikiliizingubo zemvula zezinhlanziisembatho semvulaimvula proizingubo zomsebenzi ezingangeni imvulaIzingubo zemvula ze-allegroizembatho zabesifazane zomsebenziizingubo zemvula zangaphandleukudoba izembatho zemvulaizingubo zemvula zamasoshaizingubo zemvula ze-pvcizingubo zokugqoka zomsebenziizingubo zokusebenza ijazi lemvulaizingubo zomsebenzi ezingangeni imvulaizingubo zemidlalo ezingangeni imvulaizembatho zokudoba ezingenamvulaizingubo zemvula zamasoshabujabulela izingubo zemvulaizembatho zemvula zesithuthuthuizingubo zokusebenza ezinganethwa yimvulaizingubo zemvula ezisebenzayo